Ny lohan'ny CEO Nevis Tourism Authority miaraka amin'i Toya sy Clavia
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia an'i Saint Kitts sy Nevis » Ny lohan'ny CEO Nevis Tourism Authority miaraka amin'i Toya sy Clavia
Fahefana fizahan-tany Nevis
Nevis Tourism Authority (NTA), CEO Jadine Yarde dia nanatevin-daharana an'i Toya sy Clavia (LaToya Rhodes sy Clavia Howard) tao amin'ny The Lounge noho ny resaka mahafinaritra sy freewheeling momba ny fahafinaretana sy zava-nisongadina tao amin'ny nosy Nevis.
Podcast malaza, Dishes N 'Destinations, mikendry sakafo sy mpivezivezy ary manome fahafinaretana mahandro ary ny fironana amin'ny dia farany.
Ny maniry izany amin'ity herinandro ity amin'ny seho dia CEO an'ny Nevis Tourism Authority.
Ny CEO dia nanolotra topy maso feno momba ny traikefa fialan-tsasatra Nevis, manomboka amin'ny kaody fidiran'ny nosy.
Ny fizarana amin'ity herinandro ity, izay navoaka tamin'ny misasakalina ny zoma 9 aprily, dia natokana ho an'ny toerana manintona, toeram-pisakafoanana ary sehatry ny fandrahoan-tsakafo miandry ny mpandeha any Nevis. Nandritra ny fifanakalozana maharitra adiny iray, Ramatoa Yarde dia nanolotra topy maso feno momba ny fiainana fialan-tsasatra Nevis, natomboka tamin'ny kaody fidiran'ny nosy.
Ireo mpitsidika dia tsy maintsy manolotra fanadinana RT-PCR ratsy alohan'ny fahatongavany ary takiana amin'ny fialan-tsasatra amina toerana iray amin'ireo trano fandraisam-bahiny efatra ekena - ny Four Seasons, Paradise Beach, Golden Rock Inn ary Montpelier Plantation mandritra ny 14 andro alohan'ny avela hitety ny manodidina. nosy irery. Noho ireo kavina henjana ireo dia ny Nevis no iray amin'ireo nosy azo antoka indrindra eto amin'ny faritra notsidihina, vitsy ny tranga voarakitra, tsy nisy ny maty ary tsy nisy ny fiarahamonina niparitaka.
Ny ankamaroan'ny resaka dia nifototra tamin'ny inona no mampiavaka an'i Nevis ao amin'ity nosy kambana itodihan'i St. Kitts sy Nevis ity, izay manolotra traikefa fitetezana roa tena miavaka.
"Nevis no toerana ahafahanao tonga ary irery fotsiny - milamina kokoa izany, tsapanao fa azo itokisana ny firafitr'izao tontolo izao taloha," hoy Rtoa Yarde nanoro hevitra. “Angovo miabo sy mampionona, fahatsapana fa hilamina ny zava-drehetra. Manolotra haitraitra tsy misy kapa isika; tsy misehoseho isika. Misy majika eto Nevis, ahafahanao milentika anaty kolontsaina mbola tsy niainanao hatrizay. ”
Eo ambanin'ny fialan-tsasatra misy ankehitriny ao amin'ny kaonty protokolon'ny toerana, tonga mandritra ny iray volana ny ankamaroan'ny mpitsidika ankehitriny, ka mankafy roa herinandro any amin'ny toeram-pialan-tsasatr'izy ireo ary avy eo mandany roa herinandro mandehandeha manerana ny Nosy. Nisy ny fifanakalozan-kevitra momba ny hetsika maro samihafa - nanomboka ny fitsangatsanganana an-tampon'ny Nevis Peak, hatramin'ny fitsidihana ny tranombakoka Hamilton, natokana ho an'i Papa Alexander Alexander Hamilton, teraka tany Nevis; mankany amin'ireo torapasika lava sy tsy be olona, ​​izay manintona hatrany. Ny nosy dia fantatra amin'ny fahasalamana, ary hetsika sy hetsika ivelan'ny tontolo iainana / natiora, ao anatin'izany ny Cross Channel Swim, marathon ary fetibe fihazakazahana izay atao mandritra ny taona.
Sehatra iray mahaliana ho an'ireto sakafo roa ireto no mazava ho azy fa ny sehatry ny fandrahoan-tsakafo ao Nevis, ary teto dia nitombo ny resaka nifanaovana tamin'ny fetin'ny sakafo Nevis sy ny traikefa fisakafoanana tsy manam-paharoa. Nevis dia manana vondrona eclectic amin'ny toeram-pivarotana sakafo izay manome sakafo mahandro be loatra ary manome sakafo isan-karazany ny sakafon'ny vegan hatramin'ny karnavora. Ny nosy dia miavaka amin'ny fiompiana amin'ny sakafo any ambony latabatra, miaraka amin'ny fanamafisana ireo akora vaovao ao an-toerana - hazandranomasina, voankazo ary legioma, hena sy akoho amam-borona voaangona.
Ny fizarana Nevis an'ny podcast an'ny Dishes 'N Destinations dia mandeha amin'ny misasakalina ny zoma 9 aprily. Manaraha na aiza na aiza ahazoanao podcast - na kitiho ity rohy mivantana amin'ilay fizarana ity: https://www.buzzsprout.com/1322791/episodes/8276997
Clavia Howard, CTA dia tompon'ny Lazy Daze Cruise & Travel, masoivohon'ny fivarotana lehibe izay manampahaizana manokana amin'ny dia any Karaiba. LaToya Rhodes dia mpahandro ary manana trano fivarotan-mofo antsoina hoe The salted Crust. Nanatevin-daharana ny fitiavany sakafo sy niara-dia izy ireo ary teraka ny podcast an'ny Dishes 'N Destinations isan-kerinandro.
Raha mila fampahalalana momba ny dia sy fizahan-tany momba an'i Nevis dia tsidiho ny tranokalan'ny Nevis Tourism Authority ao amin'ny https://nevisisland.com/ na mailaka aminay amin'ny [email voaaro]; aza misalasala hanaraka anay ao amin'ny Instagram (@nevisnaturally), Facebook (@nevisnaturally), YouTube (nevisnaturally) ary Twitter (@Nevisnaturally).
Momba an'i Nevis
Nevis dia ao amin'ny Federation of St. Kitts & Nevis ary ao amin'ny nosy Leeward, West Indies. Mitovy endrika aminy amin'ny tendrony volkano eo afovoany antsoina hoe Nevis Peak, io nosy io no toerana nahaterahan'ny ray mpanorina an'i Etazonia, Alexander Hamilton. Ny toetrandro dia mahazatra ny ankamaroan'ny taona miaraka amin'ny mari-pana amin'ny ambany ka hatramin'ny antenatenan'ny 80 ° F / tapaky ny 20-30s ° C, rivotra mangatsiaka ary ambany ny mety fisian'ny rotsakorana. Ny fitaterana an'habakabaka dia mora azo amin'ny alàlan'ny fifandraisana avy any Puerto Rico, sy St. Kitts. Raha mila fanazavana fanampiny momba an'i Nevis, fonosana ary fonenana, azafady mifandraisa amin'ny Nevis Tourism Authority, USA Tel 1.407.287.5204, Canada 1.403.770.6697 na ny tranokalanay www.nevisisland.com ary amin'ny Facebook - Nevis Naturally.
Vaovao misimisy momba an'i Nevis
Torolàlana nohavaozina ho an'ny visa Thai na hiditra Thailand
Minisitry ny fizahantany: Andro tsara hanokafan'i Italia ny Andron'ny Repoblika